Top Baroque-arọ na ha Famous Music .
The Baroque music bụ kpochapụwo music ịke na nke sitere Renaissance oge. Okwu Baroque bụ a Portuguese okwu nke pụtara misshapen pearl, e nyere ya aha a n'ihi na music e chere nke na-adịghị mma akụkụ a na music oge. The Baroque oge n'ike mmụọ nsọ a otutu ihe tonality na music site na-agbakwụnye na-esi ọtụtụ ebre usoro oge gboo iberibe. The Baroque ịke enyeworo ka egwú Genres dị ka opera, cantata, sonata, oratorio na concerto. Ọtụtụ n'ime ndị Baroque ịke ka na-eji na music iberibe taa. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ama Baroque-arọ na ha kasị mma-mara music iberibe.
Part 1.Johann Sebastian Bach
Part 2.George Frideric Handel
Part 3.Henry Purcell
Part 4.Antonio Vivaldi
Bach bụ a German musician na andiwet nke Baroque music oge. Ya ikwọ na-ukwuu na-asọpụrụ ha richness na nkà mara mma. Ụfọdụ n'ime ya kasị mma-mara ikwọ agụnye Goldberg ọdịiche, Brandenburg Concertos na Nkume ke B obere. Ọ bụkwa maka eke narị mmadụ atọ cantatas, ọ bụ ezie na ụfọdụ nke cantatas e furu efu ka oge, fọrọ nke nta abụọ na narị abụọ na-adị ndụ.
Handel bụ a German mụrụ dere na bụ ihe kasị ama maka ya ngwa concertos, usoro ihe nkiri na anthems. Otu n'ime ịṅụ kasị hụrụ n'anya iberibe bụ Mesaya ahụ, ndị ọzọ nke ọma kwuru iberibe gụnyere echichi Anthems, Mmiri Music, Trio sonatas op. 5, concerto Grosso op. 6 na Music maka Royal ezimezi oku. Ọ na-maara na ekewet ogologo eriri oratorios nke na-agụnye Joshua, Solomon, The Nhọrọ nke Hercules na Jeptha.
The English andiwet Purcell ama maka incorporating Italian na French ọcha n'ime ikwọ. Purcell n'ezie-eche na-otu nke kasị ukwuu English-arọ niile oge. Ọrụ ya na-agụnye Dido na Aeneas, iri na abua sonatas na Bilie m echiche. Ọ bụ ezie na ọ na-otoro maka ọrụ nke opi Voluntary a mpempe e dere site ya na niile ma kama dere site Jeremiah Clarke.
Mụrụ na Venice na March 4th 1678, Antoni Vivaldi bịara mara dị ka a ma ama andiwet Otú ọ dị ọ na-makwaara dị ka onye ozizi, cleric na violin. Ghọtara dị ka otu n'ime ndị kasị mma-mara Baroque-arọ ya egwú mmetụta nwere ike hụrụ niile ofụri Europe. Vivaldi na-kasị mara maka ya egwú mpempe anọ a kara aka nke bụ a violin concerto. Ọ na-mara maka 12 sonatas, L'estro Armonico na La Stravaganza (The oké).
> Resource> Music> Top Baroque-arọ na ha Famous Music